Iimpendulo zeGmail ngoku ziyafumaneka ngeSpanish | Iindaba zeGajethi
Inkonzo ye-imeyile kaGoogle (i-Gmail) yenye yezona mveliso zisetyenziswayo kwi-intanethi enkulu. UMay wayeza. Kwaye iqela likaGoogle lenziwe ngokusemthethweni inqaku elitsha le-app ye-Gmail ye-Android kunye ne-iOS. Kwakumalunga nenqaku le 'Smart Replies', indlela entsha yokuphendula ii-imeyile ezingenayo.
Nangona kunjalo, iiGmail Smart Answers zazifumaneka ngesiNgesi kuphela. Ngoku, kwiinyanga ezimbini emva kokunikezelwa kwayo, abo banoxanduva lophuhliso bayo baqinisekisile ngeakhawunti ye-Twitter ukuba inqaku ngoku liyafumaneka ngeSpanish.
Ngokweqela likaGoogle, ukufunda ii-imeyile ngelixa uhamba kulula. Nangona kunjalo, ukubaphendula esitalatweni sele kungumsebenzi onzima ngakumbi. Ngenxa yoko, eyona ndlela yokunxibelelana nesicelo kunye nokuvelisa ngakumbi yayikukufaka isicelo ngokwaso ukuphakamisa impendulo yokugqibela.
Omnye wemifanekiso ohamba nesi sithuba ucacisa kakuhle ukuba zeziphi na ezi mpendulo ze-Gmail. Kuyabonakala, isicelo siya 'kufunda' umxholo we-imeyile kwaye sinike ukuya kuthi ga kwiimpendulo ezi-3 ezinokwenzeka. Lumka, kungabikho mpendulo icacisiweyo, kodwa bafuna ukusekwa kwiimpendulo ezimfutshane, ezicacileyo nezicacileyo ezinokuthi ngonqakrazo olunye lomnwe esinokuzithumela kunxibelelwano lwethu.
Ngoku, ezinye zezinto esizithanda kakhulu malunga nenqaku elitsha le-Gmail yile umsebenzisi angahlela iimpendulo ngendlela athanda ngayo. Oko kukuthi, unokusebenzisa impendulo ephakanyisiweyo okanye uyihlele ukuze yenze ibanzi ngakumbi okanye ngolwazi olongezelelweyo.
Ngokunjalo, iqela likaGoogle likwazibophelele ekufundeni. Kwaye iimpendulo zeGmail eziNgcono zazingazukuncipha. Ngenxa yoko, ngokuhamba kwexesha, isicelo siya kulungelelanisa iimpendulo ezicetyiswayo. Oko kukuthi, kuya kusekelwa kwisigama esisetyenziswa ngumsebenzisi mihla le efowuni o ipilisi. Uhlaziyo ngoku luyafumaneka ukuze ulufake kuwo omabini amaqonga eselfowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iimpendulo zeGmail ngoku ziyafumaneka ngeSpanish
Ingeniso yeselula yeNetflix inyuka ngama-233%